कोरोना प्रकोपमा लूट, नगरपालिकाले किनेको एउटै साबुनको मूल्य ३ हजार ८३१ रुपैयाँ!
कोरोना प्रकोपमा लूट, नगरपालिकाले किनेको एउटै साबुनको मूल्य ३ हजार ८३१ रुपैयाँ! नगरप्रमुख भन्छन्, ‘कर्मचारीको लापरबाहीले गलत हिसाव, अनियमितता होइन’
कोरोना महामारीका कारण सर्वसाधारण भोकभोकै मर्ने अवस्था रहेको बेला सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिकाले लूट मच्चाएको छ। नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा लूटको फेहरिस्त पुष्टि हुन्छ।
नगरपालिको खर्च विवरणमा देखिएको मनलाग्दीले कोरोनाका नाममा भएको डरलाग्दो लूटलाई पर्दाफास गरेको छ। कोरोना प्रकोपमा नगरपालिकाले अहिलेसम्म २ करोड २१ लाख ३४ हजार ३ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
कोरोना नियन्त्रणमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरूको खरिदमा उक्त रकम खर्च गरिएको हो। विवरणमा स्यानिटाइजर, साबुन, झुल, म्याट्रेस, मास्क, पञ्जा लगायतका सामग्रीको खरिद मात्रा, खरिद मूल्य स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ।
तर, उक्त विवरणमा लाइफबोय साबुनको मात्रा र मूल्यमा देखिएको अनियमितताले सबैलाई चकित बनाएको छ। खर्च विवरणलाई नियाल्दा एउटा लाइफबोय साबुनको मूल्य ३ हजार ८३१ रुपैयाँ ४२ पर्न गएको देखिन्छ।
सार्वजनिक विवरणमा चैत २२ गते ९५ थान लाइफबोय साबुन खरिद गरिएको र त्यसको खरिद मूल्य ३ लाख ६३ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ छ। यसअनुसार एउटा साबुनको मूल्य ३ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ ४२ पैसा पर्छ।
त्यसैगरी, चैत २६ गते फेरि १ हजार ४ सय ४० थान लाइफबोय साबुन किनिएको छ। जसको मूल्य ४ लाख ३१ हजार ९ सय ५५ छ। त्यसअनुसार एउटा लाइफबोय साबुनको मूल्य २ सय ९९ रुपैयाँ ९९ पैसा पर्न आउँछ।
त्यस्तै, चैत ३१ फेरि ६ हजार ९ सय १२ थान लाइफबोय साबुन किनिएको छ। जसको मूल्य २ लाख ३ हजार ८ सय ६ रुपैयाँ छ। यहाँ एक थान साबुनको मूल्य २९ रुपैयाँ ४८ पैसा परेको देखिन्छ।
सामान्य अवस्थामा ९५ ग्रामको एउटा लाइफबोय साबुनको मूल्य ३० रुपैयाँ र १ सय २५ ग्राम तौल भएको साबुनको ३५ रुपैयाँ पर्छ। तर, नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा राखिएको साबुनको मूल्य मनगढन्ते भएको स्पष्ट हुन्छ। नगरपालिकाकै विवरणमा पनि साबुनको मूल्य खरिद गर्दैपिच्छे फरक–फरक छ।
नगरपालिकाको खर्च विवरणमा स्यानिटाइजर लगायत अन्य सामग्रीकोे मूल्यमा पनि अनियमितता देखिएको छ। चैत २२ मा २ हजार ८ सय ४ थान स्यानिटाइजर ७ लाख ७ हजार १ सय ९२ रुपैयाँमा किनिएको छ। जसअनुसार प्रति थान स्यानिटाइजरको मूल्य २५२ रुपैयाँ २० पैसा पर्छ।
चैत २६ गते ३ हजार ४० पिस स्यानिटाइजर किनेको छ। जसको मूल्य ६ लाख २२ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ देखाइएको छ।
जसअनुसार प्रतिथान स्यानिटाइजरको मूल्य २ सय ४ रुपैयाँ ७५ पैसा हुन आउँछ। चार दिनको अन्तरालमा प्रतिपिस स्यानिटाइजरको मूल्यमा ४७ रुपैयाँ ४५ पैसाको अन्तर देखिन्छ।
प्रिन्ट गल्ती, कर्मचारीको गल्ती होः नगर प्रमुख
बोदेबरसाइन नगरपालिकाका प्रमुख आतेशकुमार सिंह यादवले कोरोना प्रकोपमा अनियमितता नभएको बताएका छन्। कर्मचारीको लापरबाहीका कारण गलत हिसाब सार्वजनिक हुन पुगेको यादवको भनाई छ।
‘सबै कर्मचारी नयाँ छन्, भर्खर–भर्खर आएर काम थालेका कर्मचारीमा अनुभवको कमी छ, हिसाबमा उल्लेखित ९५ थान साबुन होइन, हामीले ९५ कार्टुन किनेका हौं, प्रतिगोटा २६ रुपैयाँ सरदरले किनेको हो,’ यादवले नेपाली पब्लिकसँग भने।
कतिपय ठाउँमा मूल्यको पछाडि दशमलव छुटेको बताउँदै यादवले कर्मचारीको लापरबाहीले नगरपालिका विवादमा परेको टिप्पणी गरे। कोरोना प्रकोपका बेला सामग्रीको मूल्य पनि बढेकाले केही महँगो दरमा किन्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको उनको दावी छ।
#कोरोना_प्रकोप #बोदेबरसाइन_नगरपालिका #सप्तरी #आतेशकुमार_सिंह_यादव #कोरोना_महामारी #काेराेना_भाइरस
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ५, २०७७ ००:२९